Aqriso: Nuxurka khudbaddii uu MW Farmaajo ka jeediyey shirka QM | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Aqriso: Nuxurka khudbaddii uu MW Farmaajo ka jeediyey shirka QM
Aqriso: Nuxurka khudbaddii uu MW Farmaajo ka jeediyey shirka QM
Madaxweynaha Golaha Loo dhanyahay, martida sharafta leh, Marwooyin iyo Mudanayaal.
Waxaa sharaf iyo nasiib ii ah in aan hadaljeedintan ka sameeyo golahan maanta oo ay ku beegantahay sanad guuradii 75aad ee midnimadeenna, nabadda, horumarka iyo barwaaqada, iyada oo ay muhiim inoo tahay in aan markale balanqaadno sida ay nooga go’an tahay ku dhaqanka xeerka Qaramada Midoobay, innaga oo wadar-ogol balaaran ka gaarayna iskaashi mideysan oo aan ka yeelano horumarka waara ee caalamiga ah. Ma jiraan wax ka muhiimsan Wadar-ogol, iskaashi iyo ficilo hiigsi leh oo isku mid ah inta lagu jiro caqabadahan siyaasadeed, bulsho iyo dhaqaale ee dunida ka jira ee uu horseedey cudurka safmarka ah ee Karoona.
Mudanayaal , martida sharafta leh, Mudanayaal iyo Marwooyin
Guud ahaan dunida, dhammaan dhaqaalaha heerarkiisa kala duwan waxaa saamayn ba’an ku reebay cudurka Karoona, isaga oo aad u ragaadiyay dalalka nugul. Soomaaliya , sida adduunka qeybihiisa kaleba, waxaa nasoo wajahay dhaqaale xumo ba’an oo xanuun badan, shaqo la’aan, iyo baahida loo qabo in la maalgaliyo adeegyada asaasiga ah si dadka looga difaaco safmarkan loo dhinto. Waxaad dhammaantiin nala qiri kartaan in tani shaqo balaaran ku tahay dal colaado kasoo kabanaya sida Soomaaliya oo kale , balse dowladdeenna waxay heegan u tahay in ay wajahdo caqabad kasta oo horteenna ah.
Mudanayaal, Martida sharafta leh, Marwooyin iyo Mudanayaal
Qalalaasaha adduunka ka dhaca sida Karoonaha oo kale waxa laga dhaxlaa fursado iyo caqabado ay tahay in laga gudbo. Dhammaanteen waan aragnay dhibaatada caafimaad iyo tan dhaqaale ee uu keenay safmarka, kuwaas oo aan weli dareemayno, lana noolnahay.
Qaramada Midoobay iyo bahwadaagta qaramada ee xubnaha ka ah waa in ay iskaashi cusub ka yeeshaan sidii looga hortagi lahaa cudurka Karoonaha.
Maqaal horeSawirro: Guddoomiye Najah oo tababar u soo xiray dhalinyarada Marka
Maqaal XigaWarbixin: Door noocee ah ayuu MW Lafta Gareen ka qaatay heshiiska doorashooyinka